Jakobho 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
5 Chinzwai zvino, imi vapfumi,+ chemai, muchiungudza pamusoro penhamo dzenyu dzichakuwirai.+ 2 Pfuma yenyu yaora, uye nguo dzenyu dzokunze dzadyiwa nezvitemamachira.+ 3 Ndarama yenyu nesirivha yenyu zvapera nengura, uye ngura yazvo ichava souchapupu hunorwisana nemi uye ichadya nhengo dzenyu dzine nyama. Makazviunganidzira+ chimwe chinhu chakafanana nomoto+ pamazuva okupedzisira.+ 4 Tarirai! Mibayiro inofanira kupiwa vashandi vakakohwa minda yenyu asi yamakaramba muinayo,+ inoramba ichishevedzera,+ uye kukumbira rubatsiro+ kwevakohwi kwakapinda munzeve+ dzaJehovha wemauto. 5 Makagara muumbozha panyika uye makatsvaka zvinofadza nyama.+ Makakodza mwoyo yenyu kusvikira pazuva rokuurayiwa.+ 6 Makapa mhosva munhu akarurama uye makamuponda. Zvino iye haasi kukushorai here?+ 7 Naizvozvo, hama, shivirirai kusvikira pakuvapo+ kwaShe. Tarirai! Murimi anoramba achimirira chibereko chinokosha chenyika, achishivirira nokuda kwacho kusvikira awana mvura yokutanga nemvura yokupedzisira.+ 8 Nemiwo shivirirai;+ simbisai mwoyo yenyu, nokuti kuvapo kwaShe kwaswedera pedyo.+ 9 Hama, musagurukutirana, kuti murege kutongwa.+ Tarirai! Mutongi amire pamberi pemasuo.+ 10 Hama, fungai nezvevaprofita+ vakataura vachishandisa zita raJehovha+ somuenzaniso+ wokutambura nezvinhu zvakaipa+ nokushivirira.+ 11 Tarirai! Tinoti vanofara vaya vakatsungirira.+ Makanzwa nezvokutsungirira kwaJobho+ uye makaona zvaakaitirwa pakupedzisira naJehovha,+ kuti Jehovha ane rudo rukuru uye ane ngoni.+ 12 Hama dzangu, kunyange zvakadaro, kupfuura zvinhu zvose, chokwadi regai kupika, nedenga kana nenyika kana nemhiko chero ipi zvayo.+ Asi Hungu wenyu ngaave Hungu, uye Aiwa wenyu, Aiwa, kuti murege kutongwa.+ 13 Pane munhu anotambura nezvinhu zvakaipa pakati penyu here? Ngaarambe achinyengetera.+ Pane munhu anofara here? Ngaaimbe mapisarema.+ 14 Pane munhu anorwara pakati penyu here?+ Ngaashevedze varume vakuru+ veungano, uye ngavamunyengeterere, vachimuzora mafuta+ vachishandisa zita raJehovha. 15 Munyengetero wokutenda uchaporesa murwere,+ uye Jehovha achamumutsa.+ Uyewo, kana akaita zvivi, achakanganwirwa.+ 16 Naizvozvo reururiranai pachena+ zvivi zvenyu munyengetererane, kuti muporeswe.+ Kuteterera kwomunhu akarurama, kune simba guru+ pakushanda kwakunoita. 17 Eriya akanga ari munhu aiva nemanzwiro akafanana needu,+ asi mumunyengetero akanyengeterera kuti mvura irege kunaya;+ uye haina kunaya panyika iyoyo kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu. 18 Akanyengeterazve, denga rikanayisa mvura, nyika iyoyo ikabereka zvibereko zvayo.+ 19 Hama dzangu, kana mumwe ari pakati penyu akatsauswa pachokwadi uye mumwe omudzora,+ 20 zivai kuti uyo anodzora mutadzi panzira yokukanganisa+ kwake achaponesa mweya wake parufu+ uye achafukidza zvivi zvizhinji.+